कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालका लागि नेपाली अभियान नछाड्ने, अब के होला ? (हेर्नुहोस भिडियोमा) - Nepalese Timesकारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालका लागि नेपाली अभियान नछाड्ने, अब के होला ? (हेर्नुहोस भिडियोमा) - Nepalese Times
कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालका लागि नेपाली अभियान नछाड्ने, अब के होला ? (हेर्नुहोस भिडियोमा)
नेप्लिज संवाददाता१३ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०३:५४ (8 महिना अघि) २२३ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेपालका लागि नेपाली अभियानको विवाद अन्तत छताछुल्ल भएको छ । अभियानले अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई निष्काशन गरेको भनेर विज्ञप्ती निकाल्दै गर्दा शाहीले भने आफू कुनै पनि हालतमा अभियानबाट नहट्ने बताएका छन् । उनले कुनै १ जनाले आफूलाई हटाउने निर्णय गर्दैमा त्यो निर्णय नमान्ने जिकिर गरेका छन् ।
शाहीले अभियान नै आफ्नै नाममा दर्ता रहेको पनि खुलासा गरेका छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा लागेको भन्दै अभियानले शाहीलाई कारबाही गरेको हो । नेपालका लागि नेपाली अभियानले विज्ञप्ती निकालेर ज्ञानेन्द्र शाहीले दिने अभिव्यक्ति र अरु कुनै पनि विषयहरु अभियानसंग सम्बन्धित नहने अभियानका अभियान्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन् ।
सुरेन्द्र भण्डारीहरुसँग भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियानलाई लैजाने की राजसंस्था ल्याउने अभियानमा जाने भन्ने मुद्धामा शाहीको विमति थियो । शाही भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा अघि बढ्नुपर्ने अडानपछि विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको शाहीले प्रष्ट भनेका छन् ।
नेपालका लागि नेपाली अभियानभित्र नै बसेका अभियान्ताहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ भनेर शाहीले मुद्दा उठाएपनि सुरेन्द्र भण्डारीहरु तर्किएको शाहीको भनाई छ ।
अभियानबाट आफू कुनै पनि हालतमा नहट्ने भन्दै शाहीले सामाजिक संजाल मार्फत भनेका छन्–
नेपालको लागि नेपाली अभियानले तय गरेको भ्रष्ट्राचारको अन्त्य ,बलियो राष्ट्रियता, धर्म तथा संस्कृतीको संरक्षण, तथा राजनैतिक सुद्धीकरण, पुराना पुस्ता पटक पटक सत्तामा रहदा देशले ८० लाख युवालाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था तहस नहस भइसकेकोले अव युवापुस्ता राजनितीमा ल्याई मूलुकमा विकास र सम्वृद्धि कायम नभए सम्म ज्ञानेन्द्र शाहीले लाखौ बुवा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहिनी हरुको विश्वास र भरोसालाई कुठाराघात हुन दिने छैन । म यो अभियानवाट एक मिनेट पनि हट्ने र छोड्ने छैन ।
उनले आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई अभियानलाई अघि बढाउन साथ र सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि नेपाली अभियान एउटा नितान्त स्वतन्त्र नागरिकको अभियान भएको भन्दै उनले राजनैतिक रोजेण्डा बोक्नेभन्दा अभियानलाई सफल बनाउन अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउँदै जनताको चाहाना र आवश्यकता अनुसार यसलाई भावि योजना कार्यक्रम तथा निती निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् । एक अन्तरवार्तामा अभियानको एजेण्डा तय गर्नमा ज्ञानेन्द्र शाहीको कुनै पनि भुमिका छैन भनेका छन् ।
अभियानका अभियान्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली अभियानको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेपछि धेरै जनाले भण्डारी सहित अभियानकै आलोचना गरेका छन् ।
गणतन्त्रको पक्षमा उभिएर आवाज उठाउने व्यक्तिलाई अभियानले निष्काशन गर्ने निर्णय गरेर गल्दै गरेको धेरैजसोको प्रतिक्रिया छ । सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन् गणतन्त्र फाल्नुपर्छ, गणतन्त्रले नै यो सब अराजकता फैलिरहको हो ।
तर यसलाई ज्ञानेन्द्र शाही मान्न तयार छैनन् । मुख्य जड नै यहि हो ही उनीहरुको कुरा मिल्न नसक्नु । एकचोटी शाहीको कुरा पनि सुनौँ ।
प्रतिक्रिया जनाउने धेरैले सुरेन्द्र भण्डारीलाई पैसामा बिक्ने वकिल भनेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि केही त सुधार गर्नु नै पर्छ तर देशका लागि लड्ने मान्छे हो भनेका छन् । अनि धेरैको भनाई छ की, नेपालका लागि नेपाली अभियान राजा आउ देश बचाउको सिद्धान्तमा लागेका मान्छेहरुको जमातको अभियान हो । यो अभियानबाठ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई हटाएर ठिक गर्यो ।
ज्ञानेन्द्र शाहीले राजतन्त्र स्थापनाका लागि भन्दा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत विषयमा केन्द्रीय हुनुपर्छ भनिहँदा डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरु भने गणतन्त्रको पक्षमा लाग्न नसक्ने बताउदै आएको छ ।
अभियान नै आफ्नो नाममा रहेको र आफू हट्न नसक्ने शाहीले बताईरहादा शाहीलाई हटाउने आँट गर्ने सुरेन्द्र भण्डारीहरुले अभियानबाट बाहिरिने हिम्मत गर्न सक्ला ? के अब शाही र भण्डारीहरुबीचको यो टकराबले अभियानको भविश्य डामाडोल नै भएको हो त ?
शाही अभियानबाट हटेनन भने सुरेन्द्र भण्डारीहरुले यो नामको अभियान छाडेर अर्कै नामबाट अभियान सुरु गर्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।